Borama: Wasiir ka tirsanaa Xukuumadda Madaxweyne Rayaale oo ku biiray Xisbiga KULMIYE | Xarshinonline News
Borama: Wasiir ka tirsanaa Xukuumadda Madaxweyne Rayaale oo ku biiray Xisbiga KULMIYE
Posted by xol2 on June 19, 2010 · Leave a Comment
Borama,(Nnn)- Wasiir-ku-xigeen ka tirsan Xukuumadda Somaliland, ayaa sheegay in uu iska casilay jagadii uu ka hayay Xukuumadda Madaxweyne Rayaale oo uu gaabis ku eedeeyay. Isla markaana ku biiray Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE.
Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Deegaanka iyo horumarinta reer Miyiga Siciid Maxamed Bile, ayaa sheegay in uu iska casilay xilkii uu hayay.
Wasiir-xigeenka oo ka hadlay Munaasibad uu ka qayb-galay Murashaxa Madaxweyne-xigeenka ee XIsbiga KULMIYE Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo ka dhacday magaalada Borama ee Xarunta Gobolka Awdal, ayaa sheegay in sababta is-casilaaddiisu ay la xidhiidho gaabis ku yimi Xukuumaddii uu ka tirsanaa. “Waxaan maanta go’aansaday in aan iska casilay xilkii aan XUkuumadda ka hayay.” Ayuu yidhi Wasiir-xigeenku, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Sababta aan isu-casilay waxay tahay markaan arkay in ay tahay xukuumad gaabis ah, markaan ahay in ay tahay xukuumaddu mid umaddii dooratay waxba u qaban wayday iyo sidoo klae markaan arkay in gobolkii Awdal gabigiisiiba ay ilowday. Aniga kaligayna maaha ee Beeshaydii ayaan wataa.” Ayuu yidhi Wasiir-xigeenka is-casilay. Waxaanu sheegay Siciid in uu ku biiray Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE, isla markaana u ololaynayo.
Filed under doorashooyinka, xisbi
← Jarmalka oo dhulka la dhigay, Maraykanka iyo Slovenia oo isku barbar dhacay iyo Ingiriiska iyo Aljeeriya oo isku ag kufay
Kooxda isu-duwidda goob-joogayaasha Caalamiga ah oo ka hadlay Doorashada →